ရန်လိုကျွဲ – ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်ခြင်း (သရော်စာ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျော်ဒီး - ဗြုတ်စဗျင်းတောင်းရွာအတွက် အမှိုက်ပုံး
ရန်လိုကျွဲ – ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်ခြင်း (သရော်စာ)
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅
ခုတလော အယ်ဒီတာမင်းတို့က သတင်းထောက် ရန်လိုကျွဲကို အထူးအော်ဟစ် ငေါက်ငမ်းနေကြသည်။ “မင်းရေးတဲ့ ထူးမ ခြားနားသတင်းတွေကို ဘယ်သူတွေဖတ်မှာလဲ” ဟု အယ်ဒီတာချုပ်က ဆူသည်။
“အလုပ်ချိန် နောက်ကျတာ တစ်လကို အကြိမ် ၂၀ ရှိနေပြီ၊ သတိထားပါ” ဟု လက်ထောက်အယ်ဒီတာက လက်ထောက်ပြီး လှမ်းသတိပေးသည်။ ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်အထိ လာခလုတ်တိုက်သူလည်း ရှိ၏။
မင်းရဲ့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်ခေါင်းက ကြည့်ရဆိုးလိုက်တာကွာ ဟု အယ်ဒီတာတစ်ယောက်က မှတ်ချက်ပြု၏။
ရုံးတွင်းစည်းကမ်းချက်တွင် “သတင်းထောက်တို့ ဆံပင်ဆေးဆိုးခွင့်မရှိ” ဟူသောအချက် ဖြည့်စွက်ရန်ပင် သူက ကြိုးပမ်း လိုက်သေး၏။ သို့သော်လည်း အသက် ၄၀ ကျော်ပြီဖြစ်သော၊ ဆံပင်ကို အမည်းရောင်ပုံမှန်ဆိုးနေရသော အယ်ဒီတာ တစ်ဦးက ဗီတိုအာဏာသုံးပြီးဟန့်လိုက်သဖြင့် ရန်လိုကျွဲ၏ ရွှေအိုရောင်ဆံပင်တို့ အသက်ချမ်းသာရာရသွားသည်ဟု ဆိုရ မည်။ သို့သော်လည်း ချမ်းသာခွင့်မရသည်ကတော့ “အရေးအသား ညံ့ဖျင်းသည်” ဟု နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အဆူခံနေရခြင်းပင်။
ရေးခြင်း သားခြင်း အားနည်းလျှင် ပြင်ပေး တည်းဖြတ်ပေးရမည်က အယ်ဒီတာတို့အလုပ် မဟုတ်တုံလောဟု မေးလိုက်ချင် သော်လည်း မမေးရဲ။ “ဟုတ်ကဲ့ … ကြိုးစားပါ့မယ်” ဟုသာ ကတိပေးလိုက်ရ၏။ ထိုသို့ အကြိမ်တစ်ထောင်ခန့် ကတိပေး ပြီးနောက်တွင် အရေးအသားသင်တန်း ရှာပုံတော် မဖြစ်မနေ ဖွင့်ရလေ၏။
ထိုသင်တန်းကို ရှာသည်၊ ရှာသည်၊ ဒုက္ခသီရိနေပြည်တော်တွင် ရှာသည်။ သို့သော်… ထမင်းထုပ်သာ သိုးသွားသည်၊ အရေး အသား သင်တန်းကို ရှာမတွေ့၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာမေးပွဲအောင်ရေး ဦးစားပေးသော သင်တန်း၊ ကျူရှင်တို့သာ တွေ့နေရသည်။
သင်တန်းကို တွေ့မှ ဖြစ်မည်။ သင်တန်းတက်ပြီး လေ့လာဖို့ အရေးတကြီးလိုသည်။ အရေးအသား မတိုးတက်လျှင် ရာထူး တိုးပေးမည်မဟုတ်ဟု အယ်ဒီတာချုပ်က ရာဇသံထုတ်ထားသည်မဟုတ်လော။ ထို့ကြောင့် သင်တန်းကို ရှာသည်၊ ရှာသည်။
ရန်လိုကျွဲ၏ ရှာဖွေရေးသတင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး စာဖတ်နေသည်ဟုဆိုသော ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီး၏နားသို့ပင် ရောက် လေ၏။
“အရေးအသားသင်တန်းအတွက် ပူပန်မနေတော့နဲ့၊ ငါ စာဖတ်နေတာ လေးနှစ်ကြာပြီ။ စာရေးဆရာပေါင်းစုံရဲ့ အရေးအသား ပေါင်းစုံကို လေ့လာထားတယ်။ ငါ့ဆီမှာ သင်တန်းလာတက်လှည့်” ဟု ဖုန်းဆက်ခေါ်သဖြင့် ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီး စံမြန်းရာ နန်းတော်သို့ ချီတက်လိုက်သည်။ (၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီး ပညာအပေးကောင်းပုံကို ဂလိုဘယ်ဘဘ၊ သင်တန်းဆရာဘဘ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မော်ကွန်း မဂဇင်း အမှတ် ၁၅ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။)
နန်းတော်သို့ ရောက်လျှင် ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီးကို အဆင်သင့် တွေ့ရလေ၏။ ခရီးရောက်မဆိုက်ပင် အရေးအသား သင်ခန်း စာကို ချက်ချင်း ပို့ချမည်ဟု ဆိုလေ၏။
ဒူးကြီး ။ ။ “ငါက စာဖတ်နေသူကြီးဆိုတော့ အရေးအသားတွေကိုလည်း အထူးပြုစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်း…ဒီကိုရောက် လာတာ မှန်တယ်။ မင်းတို့သတင်းသမားတွေ တက်သင့်တာက မိခင်ဘာသာစကားသင်တန်းပဲကွ”
ကျွဲ ။ ။ “ဟုတ်ကဲ့…အားကိုးပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ထင်တာတွေ သင်ပေးပါ”
ဒူးကြီး ။ ။ “ကောင်းတယ်၊ ပညာလို အိုသည်မရှိ၊ ပညာဆိုတာ ဆည်းပူးလို့ မကုန်ဘူး။ သိတယ်မဟုတ်လား… ပညာဆာကူရာ ပွဲလယ်တင့်ပေါ့ကွာ။”
ကျွဲ ။ ။ “ဗျာ… ပညာဆာကူရာဆိုတာ ဘာလဲဗျ။ ပညာရဲရင့်မဟုတ်ဘူးလား၊ ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတာ ပညာရဲရင့်ပါ။”
ဒူးကြီး ။ ။ “အရင်တုန်းကတော့ ဟုတ်တယ်၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ရဲရင့်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့မှာပေါ့ ကွာ။ အဲဒီ ရဲရင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးကိုဖျက်ပြီး အသစ်ဆောက်တော့ ဆာကူရာတာဝါလို့ နာမည်ပေးလိုက်တာ။ အခု ဘယ်သူမှ ရဲရင့်လို့ မခေါ်တော့ဘူး။ ဆာကူရာလို့ပဲ ခေါ်တော့တယ်။”
ရန်လိုကျွဲလည်း မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာတို့ကို လိုက်လံမှတ်သားရလေ၏။
ဒူးကြီး ။ ။ “စကားပုံတွေ၊ ဆိုရိုးစကားတွေ၊ ဗန်းစကားတွေကို သုံးတာ မသုံးတာ အပထား၊ သိထားရမယ်။ စာရေးတဲ့အခါ ထည့်ရေးရမယ်။ ကိုယ်မသုံးရင်တောင်မှ တခြားသူဆီက ဒီလိုစကားလုံးထွက်လာရင် ဘာပါလိမ့်ဆိုပြီး အံ့သြစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့ကွာ။ ဥပမာကွာ … ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးကွာ။ အဲဒါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မင်းသိလား။”
ခက်ပြီ။ လက်ချာအစမှာပင် သင်တန်းဆရာ ဘဘ မေးခွန်းထုတ်ပြီ။
ကျွဲ ။ ။ “သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာ သင်တန်းသားက သူသိချင်တာကို မေးခွန်းထုတ်ရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အခု သင်တန်း စစချင်းမှာပဲ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတာတော့ တစ်ခုခုမှားနေပြီ ထင်တယ်”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟေ့ကောင်…ခေတ်ပြောင်းလာပြီကွ။ သင်တန်းပုံစံတွေလည်း ပြောင်းလာပြီ။ မသိရင်လည်း မသိဘူးလို့ ရိုးရိုးသား သားဖြေကွာ။ ကဲ…ငါမေးတာကို ဖြေ။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ်ဆိုတာကို မင်း ဘယ်လိုနားလည်သလဲ။”
ကျွဲ ။ ။ “အဲဒါက … ဟိုလေ…. ဟို…. ငါးကြင်းကြော် ပိုအရသာရှိ၊ ပိုပြီးစားလို့ကောင်းအောင် ငါးကြင်းဆီကိုသုံးသင့်တဲ့သ ဘောလို့ ထင်ပါတယ်”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟိုက်….သောက်ကျိုးနည်းပါပြီ။ မင်း ဘာကြောင့် အကြီးတန်းသတင်းထောက်ရာထူး ရနေတာလဲ”
ကျွဲ ။ ။ “အသက်ကြီးလာတာကြောင့် အကြီးတန်းသတင်းထောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟုတ်ပါပြီလေ … မင်းနဲ့ငါတော့ ဒီငါးကြင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပဲ ဒီနေ့ တစ်နေကုန်မှာ သေချာတယ်။ ကဲ…ငါးကြင်းဆီ ဖွင့်ဆိုချက်အကြောင်း ခဏ ထားလိုက်။ မင်း…ရှင်းသွားအောင်၊ သဘောပေါက်အောင် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်။ ပြည်သူဗဟိုပြု မီဒီယာဆိုတာကိုရော ဘယ်လိုနားလည်သလဲ”
ကျွဲ ။ ။ “ပြည်သူကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့မီဒီယာပေါ့ဗျာ … ဟဲဟဲဟဲ။”
ရန်လိုကျွဲက တဟဲဟဲ ရယ်လိုက်စဉ်တွင် ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီးကလည်း တဟဲဟဲ ရယ်လေ၏။
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟဲဟဲဟဲ….မင်းရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်က မပြည့်စုံသေးဘူး။ ငါတို့ဆီမှာ ဒုက္ခသီရိအလင်းဆိုတဲ့ သတင်းစာနဲ့၊ ပေါင်ကားတံ ဆိပ် ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာ ရှိတယ်။ ဒါတွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ မီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးပေါ့ကွာ”
ကျွဲ ။ ။ “ပြည်သူကိုပစ်မှတ်ထားတယ်၊ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံနဲ့လည်ပတ်တယ်ဆိုတော့ ပြည်သူဗဟိုပြု မီဒီယာပေါ့ဗျာ။ ရှင်းပါပြီ။”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟေ့…ဟေ့ …. ရှင်းပါပြီ၊ ဟုတ်ပါပြီလို့ အလွယ်တကူ မပြောနဲ့ဦး။ ကျောင်းတုန်းကအကျင့်တွေ ကျောင်းမှာ ထား ခဲ့။ အဲဒီ မီဒီယာက ပြည်သူကို ဘယ်လိုပစ်မှတ်ထားသလဲ၊ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိသလဲ ဆိုတာ ငါပြောပြဦးမယ်”။
ရန်လိုကျွဲလည်း ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် နာယူရလေ၏။ ဒီလူကြီးက သတင်းသမားမဟုတ်သော်လည်း ဒီကိစ္စတော့ အထူး ကျွမ်း ကျင်လိမ့်မည်။ သူ မိုးကောင်းစဉ်က ထိုမီဒီယာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့သူမဟုတ်လော။ သူ လူရှေ့ထွက်ပြီဆိုလျှင် မျက်နှာဖုံးသတင်း ဖြစ်ခဲ့သေးသည်မဟုတ်လော။
ဒူးကြီး ။ ။ “အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ လယ်သိမ်းခံရလို့ ဆန္ဒပြတဲ့သူ စသည်ဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို သေးသိမ် မှေးမှိန်အောင် ရေးတယ်၊ ထုတ်လွှင့်တယ်ကွာ။ ဥပဒေချိုးဖောက်တယ် ဘာညာဆိုပြီး ခပ်တည်တည် အော်ချက်ထုတ် လိုက်သေးတယ်။
စာဖတ်သူကို သောက်ဂရုကိုမစိုက်တာကွာ။ အရေးကြီးသတင်းတွေဆိုရင်လည်း ခပ်တည်တည်ပဲ၊ ထည့်ကို မထည့်ဘူး။ ဘယ်သူ ဘာပြောရဲမလဲ၊ ပြောစမ်း။ ဂရုစိုက်မစိုက်ဘူးကွာ။”
ကျွဲ ။ ။ “အဲဒီ မီဒီယာက ပြည်သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ ရပ်တည်နေတာဆို”။
ဒူးကြီး ။ ။ “အေး… ဟုတ်တယ်။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံသုံးပြီး ပြည်သူကိုပဲ ပြန်နှိပ်ကွပ်တယ်။ ဟီဟိ….။ ဒီတော့ ပြည်သူဗဟိုပြု မီဒီယာပေါ့ကွာ။ ကဲ….ဒီကိစ္စနဲ့ ငါးကြင်းဆီကိစ္စကို မင်း ဆက်စပ်စဉ်းစားလို့ ရပြီလား။”
ရန်လိုကျွဲ ရေးတေးတေး သဘောပေါက်သလိုရှိသော်လည်း စဉ်းစားလို့ မရသေးကြောင်း ပြောလိုက်သည်။
ဒူးကြီး ။ ။ “ညံ့ပါပေ့ အကြီးတန်းသတင်းထောက်ရယ်။ ဒါဆိုရင်လည်း ဟိုတလောက ဒုက္ခသီရိမှာ လူသိထင်ရှားဖြစ် သွား တာလေးကို ဥပမာပေးမယ်။ အလုပ်သမားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတာကို ရဲက ဟန့်တားတယ်ကွာ။ အဲဒီအကြောင်း မင်း သတိထားမိရဲ့လား။”
ကျွဲ ။ ။ “သတိမထားမိလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဂျာနယ်တွေ သတင်းစာတွေ အားလုံး ဒါပဲ ၀ိုင်းရေးကြတာ။”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟုတ်ပြီ…ဆန္ဒပြတာတွေ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သလဲ။”
ကျွဲ ။ ။ “ရဲက ကိုင်တာပေါ့၊ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ သတင်းသွားယူတဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း ကိုင်လိုက်တာပဲ။ ပြီး တော့ လူဆိုး လူမိုက်တွေကို ရာနဲ့ချီ ခေါ်ထားပြီးသုံးတော့ သူတို့ ပိုပြီး အင်အားကောင်း၊ စွမ်းအားရှိသွားတာပေါ့။”.
ဒူးကြီး။ ။ “ဟေ့…ဟေ့…. လူဆိုးလူမိုက် ဆိုတာကတော့ အရပ်သားစကားကွ။ တရားဝင်အသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့ တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှုကိုလိုလားသူ ဆိုတာကို သုံးသင့်တယ်။ ရပ်မိရပ်ဖ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်း လှပါတယ်။ ရပ်မိရပ်ဖ ဆိုတော့ တာဝန်အရ ၀င်ပြီး ဟန့်တားရတာပေါ့ကွာ၊ မဟုတ်ဘူးလား။”
ကျွဲ ။ ။”အဲဒီတာဝန်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အင်မတန်လိုလားတဲ့ပုံရတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ကိုင် တွယ်လိုက်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲခင်ဗျ။”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟဲဟဲ…ကြမ်းတယ်ဆိုတာက မင်းထင်လို့ပါ။ အဲဒါ အတွင်းအား မထည့်သေးဘူး။ စနစ်တကျလုပ်ထားတာ မဟုတ်သေးဘူး။ သို့သော်လည်း မင်းတို့တွေ မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့အထိတော့ ကြမ်းတယ်ဆိုပါတော့ကွာ။ ကာတွန်းဆရာ တစ်ယောက်ကတောင် တာဝန်ပြီးရင် အလှည့်ကျ ထွက်ပြရမှာကတော့ ဖာဝန်ပါပဲလို့ ကလိလိုက်သေးတယ်။ ဖာဝန်ဆိုတာ ဘာလဲ မင်းသိလား”
ကျွဲ ။ ။ “ဖာဝန်ဆိုတာ ဖာ … ဖာ… အင်း… ဖာဝန်ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဟိုလိုလေ…. ဟိုဟာမျိုး အလုပ်အကိုင်ကို ဥပဒေဘောင်ထဲ က ဆောင်ရွက်….”
ရန်လိုကျွဲ ရမ်းသမ်းပြောနေစဉ်မှာပင် ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ကမန်းကတန်း လက်ကာပြလိုက်သည်။
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟိုးထား၊ ဟိုးထား အကြီးတန်းသတင်းထောက်ရေ… ဖာဝန်ဆိုတာကို မင်းနားလည်ဖို့အတွက် ဥပမာအလင်္ကာ၊ ရူပကအလင်္ကာတွေကို ကျော်ဖြတ်ရဦးမယ်။ အဲဒါတွေ နောက်နေ့ သင်တာပေါ့ကွာ။ ကဲ… ဒီနေ့တော့ တစ်ခုပဲသင်တယ်။ အဲဒီတစ်ခုအကြောင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ကြစို့ကွာ။ ဟုတ်ပြီ… ဒီနေ့ ငါတို့ ဘာတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့လဲ။”
ကျွဲ ။ ။ “ဒူးထောင်ပေါင်ကားတံဆိပ် ရုပ်သံဌာန၊ ဒုက္ခသီရိအလင်းတို့ရဲ့ ပြည်သူဗဟိုပြုမီဒီယာအကြောင်း၊ ပြီးတော့ … တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုလားသူ ရပ်မိရပ်ဖတို့ရဲ့ရိုက်ချက်။”
ဒူးကြီး ။ ။ “ဟုတ်ပြီ…အဲဒါတွေကို ဘယ်လို ကောက်ချက်ချနိုင်မလဲ။ သတင်းသမားပီသစွာ လိုတိုရှင်း၊ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ပြောစမ်းကွာ။ ဒါဖြေနိုင်ရင် ဒီနေ့ သင်တန်းဆင်းမယ်။”
ကျွဲ ။ ။ “ပြည်သူကို ပြည်သူနဲ့တိုက်။”
ရန်လိုကျွဲ၏ အဖြေကြောင့် ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီးက အားရ၀မ်းသာစွာဖြင့် စားပွဲကို ဘုန်းခနဲ လက်ဖြင့်ပုတ်လိုက်သည်။
ဒူးကြီး ။ ။ “မှန်လိုက်တာ၊ တော်လိုက်တဲ့ သင်တန်းသားလေး။ ဒါဆို … ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မင်း သဘောပေါက်ရောပေါ့ကွာ။ ဟုတ်သကွ…. ငါးကြင်းကြော်ဖို့အတွက် ဆီကို တကူးတက ၀ယ်နေစရာမလိုဘူး။
သူ့ဆီနဲ့ သူ့ကို ပြန်ကြော်လိုက်ရုံပဲ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကွာ။ ဟားဟားဟား…..”
ဤသို့ဖြင့် သိမြင်နှံ့စပ်သူ ၀ါရင့်ချိုကုပ်ဒူးကြီး၏ အရေးအသားသင်တန်းပို့ချချက် ပထမနေ့ ပြီးလေ၏။
အကြီးတန်းသတင်းထောက် ရန်လိုကျွဲလည်း ပြည်သူဗဟိုပြုမီဒီယာ၏သဘောသဘာဝ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုလားသူ ရပ်မိရပ်ဖတို့၏ သဘောသဘာဝအကြောင်း သိသွားလေသတည်း။